Scardale Diet - Ihe niile I Kwesịrị Knowmara !! | Nutri Nri
Nri Scardale bụ ụdị nri nri slimming nke ejiri mara ọnwụ ọnwụ dị nnọọ ngwa ngwa, n'ihi na ị na-a caloriesụ obere calorie. Ọ bụ otu n'ime nri ndị kacha ochie kemgbe emepụtara ya ma dozie ya Dọkịta Herman Tarnower na 1970 ma bipụtara ya na 1978. Agbanyeghị na agbanyeghị ọtụtụ afọ, ọ ka nwere ọtụtụ nnabata site n'aka ndi kpebiri ibu ibu n'oge di mkpirikpi.
Nri Scardale dabere n'echiche nke ijikọta ndi na-edozi, carbohydrates na abụba, n'ime oke dị na nri nke ụbọchị ọ bụla: protein 43%, abụba 22,5% na 34,5% carbohydrates. Na afọ 70 na 80 Ihe ka n'ọnụ ọgụgụ mmadụ nabatara nri a, n'ihi ihe egwu dị na ịgbaso nri protein dị oke elu ama enen̄ede ọdiọn̄ọ mmọ.
Ruo taa, anaghị atụ aro ka ị soro nri dị elu na protein, n'ihi mmebi nke nwere ike ahụhụ akụrụ na ohere nke ịmalite ụdị ọrịa ọkpụkpụ dị ka osteoporosis. Ọbụna n'ime afọ ndị 70, n'ihi mmebi dị ogologo oge, ndị na-edozi ahụ tụrụ aro ka ha ghara iso ha ihe karịrị izu abụọ n’usoro.
Dabere na nri a, onye kpebiri ime ya nwere ike ịfu ihe dị ka gram 400 kwa ụbọchị. Enwere naanị nri 3 kwa ụbọchị, na-ewepụ nri ehihie na nri. Ndabere nke nri nwere mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri na anụ anụ. Bụ nri nnukwu protein, onye ahụ na-enwe afọ ojuju kpam kpam, agụụ adịghịkwa agụ ya agụụ. Nsogbu bụ isi nke nri a yana dịka ọ na-emekarị n'ọtụtụ n'ime ihe ndị a na-akpọ nri ọrụ ebube bụ igbochi ọtụtụ nri ndị dị mkpa maka ezigbo uto nke ahụ.
Ihe ọzọ e ji mara nri Scardale bụ na ọ na-adụ ọdụ ị drinkingụ ma ọ dịkarịa ala ihe dị ka iko 4 mmiri kwa ụbọchị Ọ bụ ezie na enweghị njedebe na ihe a tụrụ aro ga-abụ iko 8 ma ọ bụ lita abụọ nke mmiri. Mmiri oriri bara uru nke ukwuu maka ahụ ka ọ na-enyere aka iji kpochapụ nsị na ọnwụ nke abụba a kwakọbara.
1 Scardale nri ụdị menu
2 Amachibidoro ma mee ka nri dị na nri Scardale
3 Uru nke nri Scardale
4 Ndọghachi azụ nke nri Scardale
5 Video banyere nri Scardale
Scardale nri ụdị menu
Mgbe ahụ, m ga-egosi gị otu ọ ga - adị a na-ahụkarị menu na nri Scardale. Dịka m kwuru na mbụ n'ụdị nri a ọ bụ naanị Nri 3 kwa ụbọchị: Nri ụtụtụ, nri ehihie na nri abalị.
Nri ụtụtụ ga-abụ ọkara mkpụrụ osisi grape ma ọ bụ mkpụrụ osisi a kara aka, otu iberibe achịcha ọka wit na-enweghị ihe ọ bụla na kọfị ma ọ bụ tii enweghị shuga ọ bụla.
N'ime nri ị nwere ike iri ụfọdụ ọkụkọ grilled tinyere salad a na-eji ngaji mmanụ oliv. I nwere ike inwe otu mkpụrụ osisi 4 ugboro n'izu.
N'ihe banyere nri abalị, ị nwere ike ịhọrọ azụ na-enweghị ọtụtụ abụba, ụfọdụ sie ma ọ bụ sie inine ma soro ha were ngaji nke oliv soro ha.
Amachibidoro ma mee ka nri dị na nri Scardale
Iji mee ka o doo gị anya ntakịrị ihe nri Scardale mejupụtara, m ga-edepụta n’okpuru ihe ha bụ machibidoro nri ma ọ bụ na ịnweghị ike iwere n'ọnọdụ ọ bụla na ndị ị nwere ike iri nri na-enweghị nsogbu ọ bụla na nke a na-ekwe.
Nri ndị amachibidoro maka nri Scardale bụ ndị sitere elu stachi ọdịnaya dị ka poteto, nri ndị nwere abụba agbakwunyere dị ka bọta ma ọ bụ ude, ọtụtụ mmiri ara ehi, ihe ọ alcoholụ alcoholụ mkpụrụ osisi, mmanya, sweets ma ọ bụ ngwaahịa dị ụtọ.
Na usoro nke kwere ka nri Na na ị nwere ike itinye n'ime nri na-enweghị nsogbu ọ bụla, enwere akwụkwọ nri dịka karọt, kukumba, tomato, inine ma ọ bụ broccoli. Can nwere ike iji sweeteners kama shuga na mmanya ma ọ bụ ngwa nri ha nwere ike tinye ha n'ime akwa. Banyere oriri protein, ị nwere ike ịnwe anụ ma ọ bụ azụ mana ọ ga-abụrịrị n’enweghị abụba ọ bụla.
Uru nke nri Scardale
Ọrụ ebube na-enwekarị ha Ihe oma na ihe ojoo na ndị na-agbachitere ha na ndị ọzọ na-akatọ ha, otu ihe ga-eme na nri Scardale. Ya mere, na a na-agwa gị nke ọma tupu ịmalite nri Scardale, n'okpuru ebe a, m ga-ekwu maka ọtụtụ uru ma ọ bụ uru nke ịgbaso ụdị nri a nwere ike iwetara gị.
Ọ bụ nri ị ga-enweta nti utịp n’oge dị mkpirikpi. Ọ bụrụ na ịchọrọ ibu ibu ngwa ngwa, ọ bụ nri zuru oke ịgbaso.
Site na-agụnye nri a na-eri site n'ụdị ụdị nri a kapịrị ọnụ, Kwesighi ị crazyụ ara na-agụ calorie nke ngwaahịa ọ bụla ma ọ bụ hụ etu nri ọ bụla ị na-eri dị arọ.
Ọ dịghị mkpa ka a gbakwunye ya na nke ọ bụla ụdị mmega ahụ ma ọ bụ mmega ahụỌ bụrụ n’ịgbaso ntuziaka ndị nri na-edozi, ị ga-atụfu kilogram ị setịpụrụ.
Ndọghachi azụ nke nri Scardale
Dị ka ọ na-emekarị n'ụdị nri a, nri ị ga-eso ọ dịghị edozi ya ma ọlị na aru anaghi anara nri obula okwesiri ka aru oru nke oma.
Nri ụtụtụ ọ naghị enye nri ma ọ bụ ume zuru oke iji bido ụbọchị.
Site na naanị nri 3 kwa ụbọchị, ịnwere ike ịnwe oge ụfọdụ n'ụbọchị enweghị ume, ụfọdụ adịghị ike ma ọ bụ nweru ụnwu anụ.
Dị ka ụfọdụ ndị ọkachamara n'ihe banyere oriri na-edozi ahụ si kwuo, erimeri a ekwesịghị ịgbatị ogologo oge n'ihi na ha nwere ike ibute nnukwu nsogbu ahụike dịka ụba uric acid ma ọ bụ akpịrị ịkpọ nkụ. Na mgbakwunye na nke a, akụrụ nwere ike mebie ma ọ bụ mebie ya.
Ọ bụ ezie na mmega ahụ dị mma maka ahụ, ọ naghị atụ aro ya, n'ihi enweghị nri na kalori ole na ole na-eri ụbọchị niile.
Ọ bụrụ na ị kpebie ịmalite nri Scardale ọ dị mkpa na mbụ kpọtụrụ dọkịta ezinụlọ gị iji nye gị ndụmọdụ ma ọ bụrụ na ọ nwere ike ibute ụdị ihe egwu ọ bụla maka ahụike gị.
Video banyere nri Scardale
M wee hapụ gị ihe nkọwa video banyere nri Scardale ka ị nwee ike ịmụtakwu ntakịrị banyere ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nutri Nri » Nkwere maka enyemaka » Nri Scardale
Vitamin maka ntutu
Ihe atọ ị ga-ebu n’uche tupu anwụ anwụ na-achịkwaghị achịkwa